ပါရီရှိလက်တင်ရပ်ကွက်တစ်လျှောက်လမ်းလျှောက် | ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | ပဲရစ်, ကြည့်ဖို့ဘာလဲ
၏အများဆုံးချစ်စရာကောင်းထောင့်တစ်ခုမှာ ပဲရစ် အဆိုပါဖြစ်ပါသည် Latin ရပ်ကွက်, Seine ၏ဘယ်ဘက်ကမ်းတွင်, ပဉ္စမပေါ်မှာ ဒူးထောက် ပြင်သစ်မြို့တော်မှ။ လက်တင်ရပ်ကွက်တွင် La Sorbonne သည်သမိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအရအရေးပါသည့်အခြားပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကြားတွင်ရှိသည်။
ကဖေးများ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ၊ ကျောင်းသားများ၊ ဥယျာဉ်များ၊ ပြတိုက်များ၊ စျေးဆိုင်များ၊ paris ခရီးစဉ် လက်တင်ရပ်ကွက်တစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်စရာမလိုဘဲပြီးပြည့်စုံမှုမရှိပါ။
ဒီနာမည်ကဘယ်ကလဲ။ အလယ်ခေတ်မှစ။ , Sorbonne ကျောင်းသားများရပ်ကွက်အတွင်းနေထိုင်ခဲ့နှင့် သူတို့ကလေ့လာမှုဘာသာစကားတစ်ခုအဖြစ်လက်တင်စကားကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒီ site သည်ကျောင်းသားများနှင့်ပြည့်နေသောကြောင့်ယနေ့အထိဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအရာ။ ၁၉ နှင့် ၂၀ ရာစုများတွင်ထိုကျောင်းသားများသည်ထိုအချိန်ကအရေးအကြီးဆုံးနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည်။
ဒီတော့ဒီမှာလမ်းမလျှောက်ခင်အကောင်းဆုံးအရာကတော့လက်တင်ရပ်ကွက်ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုအနည်းငယ်ဖတ်ဖို့ပါ။ အားသာချက်ယူရန်, နားလည်နှင့်အခြားကြည့်ရှိသည်။ များသောအားဖြင့်အိမ်ရှေ့တံခါးသည် Place de Saint Michel ဖြစ်ပြီးနဂါးနှင့်အတူစမ်းရေတွင်းဖြစ်သည်။ အဲဒီမှာနေရာများလမ်း၏တစ် ဦး labyrinth ကျော်ဖွင့်လှစ် စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ကဖေးများ၊ အချို့မှာလှေကားထစ်များရှိသော်လည်းအဓိကနှင့်လူကြိုက်အများဆုံးလမ်းမှာ Rue Huchette ဖြစ်သည်။
El Cluny ပြတိုက် ဒါဟာအလယ်ခေတ်ကနေဘဏ္treာနှင့်အတူသေးငယ်တဲ့ပြတိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည် Cluny ၏ဂိုဏ်းချုပ်ဟောင်းများ၏နေထိုင်ရာနေရာတွင်တည်ရှိပြီးဒီနေရာတွင် The Lady နှင့် Unicorn ဟုလူသိများသောကမ္ဘာ့ကျော်ကြားသောအဆင်တန်ဆာခြောက်ခုကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ရောင်စုံလက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးရာစုနှစ်ငါးခုကျော်တည်ရှိသည်။
ဤရတနာများအပြင်လှပသောဥယျာဉ်များလည်းခဏတဖြုတ်လမ်းလျှောက်နိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အခုအချိန်မှာပိတ်ထားတာပဲ ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းခံခဲ့ရပြီးစက်တင်ဘာ ၂၉ ရက်တွင် ၂၀၂၂ အထိတံခါးပိတ်ခဲ့သည်။ နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးလူကြိုက်များသည့်ဆိုဒ်မှာ၎င်းဖြစ်သည် ရှိတ်စပီးယားနှင့်ကုမ္ပဏီစာအုပ်ဆိုင်သူ၏ပထမဆုံးပါရီစတိုးသည် ၁၉၁၉ ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်
အဆောက်အအုံသည်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဖြစ်သည့် ၁၇ ရာစုအစောပိုင်းမှစတင်ခဲ့ပြီးစာအုပ်ဆိုင်သည် ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်များမှစတင်ခဲ့သည်။ စတိုးဆိုင်သည်ပရိဘောဂများ၊ စန္ဒရား၊ လက်နှိပ်စက်များနှင့်အခြားအရာများဖြင့်ထူးဆန်းသည်။ အကယ်၍ သင်စာအုပ်တစ်အုပ်ဝယ်လျှင်စာအုပ်ဆိုင်၏အမှတ်အသားဖြင့်တံဆိပ်ခတ်လိမ့်မည်။ သင်အနီးအနားတွင်နေလိုပါက Seine ကိုအပေါ်စီးကကြည့်ရှုလျက်လာမည့်ကော်ဖီဆိုင်၌ကော်ဖီသောက်နိုင်သည်။
အဆိုပါ Pantheon ဒါဟာလက်တင်ရပ်ကွက်၌လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်တစ်ချိန်ကကြီးမားသောအမိုးခုံးရှိသောဘုရားရှိခိုးကျောင်းဖြစ်သော်လည်းယနေ့ခေတ်တွင်လောကနှင့်ပြင်သစ်သူရဲကောင်းများကိုဂုဏ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဤတွင်မြှုပ်ထား Voltaire, ဗစ်တာဟူဂို, အ Curie စုံတွဲနှင့် Antoine de Saint-Exupery နှင့် Louis Braille။ လူးဝစ် XV ကနာမကျန်းမှုမှပြန်လည်နာလန်ထူပြီးနောက်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းအဖြစ်ဆောက်လုပ်ရန်အမိန့်ပေးခဲ့ပြီး ၁၇၉၁ ခုနှစ်တွင် Gothic နှင့်ဂန္ထဝင်လေများဖြင့်ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့သည်။
အမိုးခုံးကြီးမားပြီးပွင့်လင်းသည်နှင့်အောက်တွင်ကျော်ကြားတည်ရှိသည် Foucault ချိန်သီး (မင်း Umberto Eco ရဲ့နာမည်တူစာအုပ်ကိုဖတ်ဖူးလား။ ) ချိန်သီးသည်ကမ္ဘာလည်ပတ်ကြောင်းပြသရန် Foucault ၏စမ်းသပ်မှုဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, လက်တင်ရပ်ကွက်၏အဆုံးအပေါ်ကိုဖြစ်ကြသည် လူဇင်ဘတ်ဥယျာဉ်အထူးသဖြင့်စနေ၊ သစ်ပင်များ၊ လမ်းများ၊ စကားပြောသော၊ အလယ်ကန်၏ပတ်ပတ်လည်တွင်ထိုင်ရန်ထိုင်ခုံများရှိသည်။
ဥယျာဉ်များ၏စိတ်နှလုံးသည်တော်ဝင်နန်းတော်ဖြစ်သည်။ ဥယျာဉ်များ 1612 ကနေရက်စွဲ ထို့နောက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဘုရင်မဖြစ်သောမင်းသမီး Marie de Medici မှဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ ယနေ့တွင်နန်းတော်သည်ပြင်သစ်အထက်လွှတ်တော်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ ဥယျာဉ်များသည်ပန်းပု ၁၀၀ ကျော်နှင့်ပန်ကြားထားသည့်ပန်းပင်တစ်ခုပင်ရှိသည် နာမည်ကျော် Liberty ၏ရုပ်ထု၏သေးငယ်စကေးပုံတူ အရာပြင်သစ်တို့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှပါရမီရှင်ခဲ့သည်။ လှပပြီးငြိမ်းချမ်းသော Medici စမ်းရေတွင်းလည်းရှိပါသည်။
နောက်ထပ်လှပသောဥယျာဉ်တော်သည် အပင်ဥယျာဉ်ကွဲပြားသောအပင် ၄၅၀၀ ကျော်ပါဝင်သည့်ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်တစ်ခုဖြစ်သည့်နှင်းဆီဥယျာဉ်တစ်ခု၊ Alpine ဥယျာဉ်နှင့် Art Deco ပုံစံဆောင်းတွင်းဥယျာဉ်ဖြစ်သည်။ ၁၉ ရာစုမှစတင်ခဲ့သောကြီးမားသောပျိုးခင်း ၃ ခု၊ ကြော့ရှင်းသောသတ္တုနှင့်ဖန်ထည်များလည်းရှိသည်။ ဝန်ခံချက်အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သင်သိလိုလျှင် သတ္တဗေဒ နှင့် သဘာဝသမိုင်းပြတိုက်ဌကလက်မှတ်တစ်စောင်ပေးရတယ်။ နောက်ဆုံးပြတိုက်တွင်တွင်းထွက်ပစ္စည်းများ၊ အခြားဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်သောပြခန်းတစ်ခုရှိသည်ပြတိုက်ရှိသည်။
နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာပြတိုက်သည် Curie ပြတိုက်။ သူမကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်သည့်နေရာနှင့်ရေဒီယိုသတ္တိကြွခြင်းနှင့်လျှပ်စီးများကိုလေ့လာခဲ့သည်။ အမြဲတမ်းသတိရသင့်သည် Marie Curie သည်နိုဘယ်ဆုကိုရရှိခဲ့ပြီး Sorbonne တွင်ပါမောက္ခအဖြစ်ပထမဆုံးအမျိုးသမီးဖြစ်သည်။ ဤတွင်ရှေးဟောင်းသိပ္ပံနည်းကျတူရိယာများနှင့်လှပသောဥယျာဉ်လေးတစ်ခုရှိသည်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှစနေနေ့အထိညနေ ၁ နာရီမှ ၅ နာရီအထိဖွင့်သည်။
အပေါ် လက်တင်ရပ်ကွက်အသင်းတော်များ ရှုခင်းကိုလွှမ်းမိုးလေးခုရှိသည်: Saint-Etienne၊ Saint-Severin၊ Saint Julien le Pauvre နှင့် Saint Mèdard။ အားလုံးအရမ်းလှတယ်
လမ်းလျှောက်ပြီးနောက်သို့မဟုတ်အဆုံးသတ်ပြီးနောက်ပြင်သစ်ကဖေးများနှင့်စားသောက်ဆိုင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအနားယူရန်နှင့်စားရန်နှင့်သောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားအမြဲသွေးဆောင်ဖြားယောင်းသည်။ ထဲမှာ Sorbonne ရင်ပြင် Les patios, လှပသောကော်ဖီဆိုင်ရှိပါတယ်။ နောက်တံခါးသည်အရသာရှိသောနံနက်စာအတွက်အလွန်ကောင်းသည့် Tabac De La Sorbonne ဖြစ်သည် တိုးမြှင့်.
ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပိုများလာတယ်၊ ခင်ဗျားရဲ့အကြိုက်ဆုံးတွေကိုရှာဖွေရမယ်ထင်တယ်။ များစွာသောအရာနှင့်အကောင်းဆုံးသောအရာကသင်၏အာရုံကိုဖမ်းစားရာသို့သင်ကိုယ်တိုင်သွားရန်၊ လှည့်လည်ရန်နှင့်ရပ်တန့်ရန်ဖြစ်သည်။
လက်တင်ရပ်ကွက်၌သာယာလှပသည့်လမ်းများ၊ သေးငယ်သောရင်ပြင်များ၊ သမိုင်းဝင်အဆောက်အအုံများ၊ သင်ဖတ်ရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပြားများပါရှိသောရုပ်တုများ၊ အမျိုးမျိုးသောဆိုင်များရှိသည်။ ၏ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ နာရီလက်ပတ်နာရီ ငါလည်းအဲဒါကိုလက်လွတ်မခံနိုင်ဘူး။ ၎င်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် ၁၃၇၀ ကတည်းကရှိခဲ့ပြီးအင်ဂျင်နီယာ၏အေးမြသောအပိုင်းဖြစ်သည်။ မဟုတ်သလိုအတွင်းပိုင်းလမ်းလျှောက် စိန့် Chapel။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကကျွန်ုပ်သွားသောအခါ၎င်းသည်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်လှပနေဆဲဖြစ်သည်။ စွန်းထင်းသောပြတင်းပေါက်များသည်လှပပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်များ .... ဘုရားရေ!
အကယ်၍ သင်သည်တိုက်ခန်းတစ်ခန်းနှင့်မီးဖိုချောင်များကိုငှားလျှင်၊ ၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကချက်ပြုတ်စာအုပ်ရေးသောအမေရိကန်သံတမန်၏ဇနီးဂျူလီယာကလေး၏ခြေရာကိုလိုက်လျှောက်ရန်လမ်းလျှောက်ကောင်းလမ်းလျှောက်ကောင်းလမ်းလျှောက်နိုင်သည်။ ဂျူလီနှင့်ဂျူလီရန် သူမသည်အတွက်စျေးဝယ်ပြုလေ၏ Rue Mouffetard စျေးကွက်။ နံနက် ၉ နာရီတွင်ဖွင့်လှစ်ထားသည်။ မွန်းတည့်ချိန်တွင်ပိတ်။ မွန်းလွဲပိုင်းတွင်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ထားသည်။
သင်စိတ်ဝင်စားလျှင် မွတ်စလင်ယဉ်ကျေးမှုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပဲရစ်မှာလည်းရှိနေတယ်၊ ​​ရပ်ကွက်ထဲမှာသူကကိုယ်စားပြုတယ် ပဲရစ်၏ဂရိတ်ဗလီ, 1926 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, မြို့၌အကြီးဆုံး။
၏ဥယျာဉ်သည်လှပပြီးအလွန်ကောင်းမွန်သောစားသောက်ဆိုင်နှင့်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှိသည်။ တူညီသောလိုင်းများတလျှောက်တွင်ဖြစ်ပါသည် အာရပ်ကမ္ဘာအင်စတီကျု, အာရပ်သိပ္ပံနည်းကျနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုများကိုစူးစမ်းသော။ အဆိုပါအဆောက်အ ဦး သည် ၂၀ ရာစုနှောင်းပိုင်းမှ ၁၉၈၀ ပြည့်နှစ်နှောင်းပိုင်းမှ Jean Nouvel မှဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသောခေတ်ပြိုင်တည်ဆောက်ပုံဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အဖွင့်နေရောင်ခြည်နှင့်အညီအနီးကပ်ပွင့်လင်း။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » မြို့ကြီးများ » ပဲရစ် » ပါရီရှိလက်တင်ရပ်ကွက်တစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်